Kyi Aye (Literature): ညှိုးထန်သူ
ကြင်ချစ်နွမ်းလျ ၊ လွမ်းတမ်းတဟန်
ကမ်းစမြိုင်စပ် ၊ သစ်ရွက်ညပ်သော
တပ်မက်မောရာ ၊ တောခန်းသာမှ
ငှက်ပြာမောက်နီ ၊ မြကျေးအီ၍
ပလီနွဲ့ ချီ ၊ တောင်ယှက်မှီကြ …..
ပီပြင်ပွင့်နှစ် ၊ စံပယ်သစ်လဲ
ကိုင်းဆစ်မြကြား ၊ ငွေကြယ်ပွားပင်
ချော့ဖြားသွေးယူ ၊ လိပ်ပြာကြူမွေး
စိတ်တူချစ်ဆင့် ၊ နှောင်စိတ်ရင့်ခဲ့ …..
( ရှုမဝမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၉ ၊ ဒီဇင်ဘာ )
Posted by Aung Phyoe at 20:39
MDW3September 2010 at 04:42
ဆင်းရဲနာသစ် အချစ်ဖြစ်သည် ... တဲ့။
Anonymous4September 2010 at 01:06
I disagree with the comment. I think the usage is perfectly insightful.
Anonymous 16 May 2012 at 11:51